होशियार ! यस्ता छन् घुर्ने समस्याको कारणहरू र यसले निम्त्याउने जोखिमहरू
जनवरी 21, 2019 साइन्स इन्फोटेक	3 Comments घुर्ने समस्या, डा. हेमराज कोइराला
घुर्ने समस्याको कारणहरू र यसले निम्त्याउने जोखिमहरू । श्वास नलीको आंशिक अवरुद्धताका कारणले श्वासन क्रियाको दौरान कर्णकटु आवाजका साथ उत्पन्न कर्कश कम्पन लाई घुर्ने समस्या भनिन्छ । घुर्ने समस्यालाई गहिरो निन्द्राको द्योतक मानिएतापनि यथार्थ यसको ठीक विपरित छ । वास्तवमा निन्द्रामा घुर्ने मान्छे आफू त ठीक सँग सुतिरहेको हुदैन नै, सँगै सुत्नेको पनि निन्द्रा पनि कचमच्याई रहेको हुन्छ । तथ्य यत्तिमा मात्र सिमित रहँदैैन, घुर्ने समस्याले आक्रन्त भएकाहरू वैयक्तिक, पारिवारिक, सामाजकि र आरोग्यता का अनेकौ समस्याहरूको जालमा परिरहेका हुन्छन् । फलतः दैनिक जीवनमा अनेकौंं समस्याका साथसाथै असाध्य रोगहरूको जालमा परिन सकिन्छ ।
घुर्ने समस्याको कारणहरू
← मधुमेह रोगमा के खाने के नखाने ?
घुर्ने समस्याको लक्षणहरू र यसको उपचार →
जनवरी 2, 2019 साइन्स इन्फोटेक 6
3 thoughts on “घुर्ने समस्याको कारणहरू र यसले निम्त्याउने जोखिमहरू”
Pingback:के तपाईको राती सुत्दा घुर्ने बानी छ ? यस्ता छन् कारणहरु, जानी राखौ